ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ရည်ရွယ်သည်။ သင်ဝယ်ယူမှုတိုင်းနှင့်သင်ပျော်ရွှင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်သင်ပစ္စည်းအချို့ကိုပြန်ပို့လိုပေမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါပြန်လာရေးမူဝါဒကိုဖတ်ပါ။
အာမခံအတွင်းတွင်ပြန်လည် / ငွေပြန်အမ်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်လဲလှယ်နိုင်သောပစ္စည်းများ * အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစံနှုန်းအတိုင်းလိုက်နာပါ။
၁။ ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင်ပျက်စီးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊
2. မမှန်ကန်ကြောင်းအရွယ်အစား / အရောင်အတွက်လက်ခံရရှိပစ္စည်းများ။
အတွင်းပြန်ရောက် / ပြန်အမ်းသို့မဟုတ်လဲလှယ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများ7ရက်ပတ်လုံး လက်ခံရရှိသူသည်အောက်ဖော်ပြပါစံနှုန်းအတိုင်းလိုက်နာရမည်။
2. ပစ္စည်းများကို tags များနှင့်မပြောင်းလဲသောအသုံးမပြုပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ဤအခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ပေးပို့မည့်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တာ ၀ န်မရှိပါ။
အရည်အသွေးပြissueနာမရှိသောပစ္စည်းများအတွက်၊ ပြန်ပို့သောပစ္စည်းများကိုအသုံးမပြုဘဲနှင့်မူရင်းထုပ်ပိုးမှုတွင်သေချာပါစေ။ ပြန်လာသောတောင်းဆိုမှုများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လာသောလိပ်စာသို့မပို့မီကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့မှခွင့်ပြုရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ကုန်ပစ္စည်းပြန်ပို့ပုံစံမပါဘဲပြန်လာသည့်ပစ္စည်းများကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
၁။ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းအာမခံသောပစ္စည်းများအပြင်ကုန်ပစ္စည်းများ။
2. အသုံးပြုပြီး tag-ဖယ်ရှားသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုပစ္စည်းများ။
* လုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ပြီးတိုင်းတာသည့်ပစ္စည်းများ၊ စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများ။
တစ် ဦး ပြန်လာတောင်းဆိုချက်ကိုလုပ်ခြင်းမပြုမီ
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုသင့်၏အမှာစာသည်သင်္ဘောတင်စဉ်ကာလအတွင်းမှာယူမှုကိုပယ်ဖျက်လိုပါကပြန်လည်တောင်းခံမှုမပြုလုပ်မီလက်စွဲစာစောင်ကိုလက်ခံရရှိသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ပြည်တွင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုံးစံရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အေဂျင်စီများပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်စာပို့သူမှစာပို့ရန်အထုပ်ကိုယူရန်ငြင်းဆန်ပါကသို့မဟုတ်သင်၏ဒေသဆိုင်ပိုင်ရှင်များထံမှပေးပို့သည့်ပစ္စည်းကိုမသိမ်းဆည်းပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အထုပ်၏အခြေအနေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်သင်၏ပြန်လည်ပေးပို့မှုတောင်းဆိုမှုများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
အထုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိုဒေါင်သို့ပြန်ရောက်လျှင် သုံးစွဲသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရင်း (အသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးပါ)ငွေပြန်ပို့ခြင်း (PayPal မှ) ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါမည်။ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းကိုစီစဉ်ပါမည်။ သို့သော်နားလည်ပေးပါ ပြန်အမ်းငွေမရပါ ဒီအခြေအနေမှာထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဖောက်သည်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းပြချက်အသေးစိတ်
လိပ်စာမှား / လက်ခံသူမရှိပါ
* မမှန်ကန်သောဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက် / ပေးပို့ခြင်းဖုန်းများနှင့်အီးမေးလ်များကိုအဖြေမပေးပါ
* ၀ ယ်ယူသူသည်အထုပ် / လခအခွန်ကြေး / အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှုကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်သည်
ပြန်ပို့လိပ်စာ & ပြန်အမ်း
ပြန်ပို့မည့်လိပ်စာ- သင့်ပြန်လာသောထုတ်ကုန်များကို တရုတ်နိုင်ငံရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဒေါင်သို့ ပေးပို့ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး အမြဲပို့ပေးပါ"ပြန်လာသို့မဟုတ်လဲလှယ်"ပြန်လာသည့်လိပ်စာကိုရယူရန်အတွက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသို့ ဦး စွာအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးသင်၏အထုပ်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အထုပ်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတံဆိပ်တွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်လိပ်စာသို့မဆိုပြန်ပို့ပါ။ အထုပ်များကိုမှားယွင်းသောလိပ်စာသို့ပြန်ပို့ပါကတာဝန်မယူပါ။
ပြန်အမ်းငွေ ပြန်အမ်းငွေကို သင့်ဘဏ်အကောင့်သို့ ထုတ်ပေးပါမည်။ မူရင်းပို့ဆောင်ခနှင့် အာမခံသည် ပြန်အမ်း၍မရပါ။
သင်၏ပြန်လည်ပေးပို့မှုသို့မဟုတ်လဲလှယ်မှုတောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည်သင်၏မူဝါဒ၊ အာမခံချက်၊ ထုတ်ကုန်အခြေအနေနှင့်သင်ပေးအပ်ထားသည့်သက်သေအထောက်အထားများအရသင်၏ပြန်လည်ပေးပို့မှုတောင်းဆိုမှုကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။
Trackable Packages စုံစမ်းရေးကာလ
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ရေကြောင်းကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကာလအတွင်းတင်သွင်းသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုသာလက်ခံသည်။ သင်မရရှိသေးသည့် Package များကိုစစ်ဆေးလိုပါကလိုအပ်သောအချိန်အတွင်း Customer service သို့ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
အမြန်အမြန်: 30 တင်ပို့နေ့ကနေရက်ပေါင်း
* မြန်ဆန်စာတိုက် / Prioriy လိုင်း / Economy Air: 60 တင်ပို့နေ့ကနေရက်ပေါင်း
* စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု - ခြေရာခံ: 90 တင်ပို့နေ့ကနေရက်ပေါင်း
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။